I-R1 R1 kwiNdlela: Isihlalo sePants Review
Uhambo oluphefumlelweyo oluphefumlelweyo lwe-MotoGP oluhamba nge-Yamaha
Ndiye ndikhumbuza nge-Yamaha R1 kunye ne-R1 M zezobuchwepheshe, kwaye ndakhupha indawo eninzi eneengqungquthela malunga ne-injini ephezulu yokuvuselela i-injini, ukuxinwa ngokukodwa, kunye ne-chassis entsha (ingakhankanyi i-smartphone-based telemetry system) , esicatshulwa kwisihlolisiso sam esicatshulwa esandula . Kodwa yintoni efana nayo, ukusuka kwinqanaba lebhola lebhola, ukukhwela i-Yamaha R1 endleleni?
Masibekele ukuvavanya ukuvavanya kweyona nto entsha yinkwenkwe embi apho kuya kuthi (ngokuqinisekileyo) ibone indlela yokwenza ezinye izinto: kwizitrato zikawonkewonke.
Njengazo zonke i-MotoGP ezifunyenweyo ezivela kwi-MotoGP, i-R1 ine-ergonomics engathandabuzekiyo: ingendawo ephakamileyo yokuphakama kwe-inthanethi ezingama-33.7 intshi, i-clipbar kwi-handlebars efuna ikhwelo elomeleleyo, kunye neentsika ezibeka imilenze yakho emva. Kuyi-posture ezinikezelekileyo, ngokuqinisekileyo, kodwa enye ifanelekile nomsebenzi wokuhlola le missile yehlabathi ephezulu. emva kwakho konke, awuyi kufuna ukuba umshini wakho ophefumlelweyo we-MotoGP ube ne-backer cruiser ergos, ngaba wena?
Umvo wexesha liphakanyiswe yipaneli yecandelo, ebonisa ulwazi oluninzi ngekrini elula yokufunda i-TFT. Uluhlu lweskrini lutshintsho kunye nezicwangciso zendlela yokukhwela, kwaye isibonakaliso siqhakazile, sicacile kwaye sihlobo esinomlutha wokubheka-ngakumbi kuba yonke into evela kwi-lever input lever to front / aft g-force iboniswa.
Xa imodi yokulandelela idlala, iirejista eziphezulu zegrafu tachometer zibonakala ziboniswe ngelixa i-mode mode yokuhamba iyenziwa kakhulu.
... kwaye Uphelile!
Flip the standstand up kwaye ucofe kwi gear, kwaye i-R1's kinetic capabilities ithatha. Kukho utyando oluqinileyo ukusuka kwii-rpms ezantsi, kwaye nangona kungenjalo nje ngokugxininisa njengento enjenge-bonkers njenge-Kawasaki H2 ephezulu, loo nto isabalulekile ngokwaneleyo ukwenzela ukuba uzive ngathi unamathele kwizinto ezaneleyo ukuba zenze umonakalo omkhulu .
I-injini isandi i-throaty kunye ne-voluminous-ingakumbi xa ibuyela kwiirejistara eziphakathi kunye nephezulu-inqanaba le-decibel linamandla kangangokuba kwakwanele ukuqala imitha yomsindo kwaye ndibhengeze i-Mazda Raceway iLaguna Seca.
Esi sitratweni, ukuba i-note exhaust ingabinxilisayo kwaye i-stock-s-stock-sounding sounding, okanye, ngokuxhomekeka kwimbono yakho, ebonakalayo ngokwaneleyo ukubeka ingqwalasela engafunekiyo ekuthotyelweni komthetho. Ngethuba lam ngelibhayisiki ndivakalelwa njenge-badass road racer eboshwe emzimbeni (kunye nokugibela iigesi) zoluntu. Isiva sisinxilisayo kwaye sisincoko, ngokukodwa ngaphakathi kwimeko yokuduka kwidolophini: ingaba yintoni enye into engekho mthethweni ngaphandle kwexesha lokukhawuleza ngokukhawuleza ngeemigangatho emininzi yokubaluleka ngelixa ehamba kwindawo efanelekileyo yokuqhubela umqhubi kunendlela?
Ulawulo luka-R1 lwe-electronics lubonakala lukhululekile endleleni, oko kukuthi kuba akunakwenzeka ukuba kubangele phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Uza kuziva ukuba isenzo sokulwa ne-wheelie sigcina isondo esingaphambi komhlaba ngexesha lokukhawuleza kanzima, kodwa ukulawulwa kwe-traction kunye ne-ABS kunzima kakhulu ukuphazamisa xa i-tarmac isomile kwaye ubuso bubunzima. I-Cornering iziva ikhuselekile, inobungozi bokugqibela, kodwa ayibonakali ngokubanzi ububanzi be-R1 ubuchule ngenxa yokuba kunzima kakhulu ukungena kwi-bike yekhono xa ibhekene nokwazisa ngokutshintsha iipatheni zendlela kunye neemeko ezingaphezulu kwe-iffy .
Ukuba uqonda umendo kule ntambo elandelwayo, kungesizathu esilungileyo: i-Yamaha R1 iyona sihogo esisodwa somshini wokusebenza, ibhayisiki elinomlinganiselo omncinci onzima ukuba ungene kulo mzila, ungabikho kwimiqathango yoluntu iindlela. Ngokuqinisekileyo, kunokuthi kube lula kunokuba ungalindela ukukhwela ngokukhawuleza, kodwa kunzima kunokuba ungalindela ukuchaphazela umda ophezulu wemida yawo. Akunjalo nje into ehlazo ukuba imbongolo yayo idonsa, ukuxhamla umzimba, ukukhwabanisa ukukwazi ukukhenkceza ukukwazi ukukhenkcela, kunzima nakwazi ukubona ukuba ungayenza ntoni ngaphandle kokuba uthathe indlela enesibindi (ejongene nokuhlolwa okufanelekileyo kunye nokuhlalutya kwendlela yamaphepha ekhompyutheni). Kodwa kunjalo yimeko ye-superbike yesimanje: eyinkimbinkimbi, ekwaziyo, neyinkimbinkimbi kunanini ngaphambili, enokukwazi ukucelomngeni abagibeli abanamathuba amaninzi ekuphuculeni izakhono zabo ngelixa bezama ukufikelela kwimida engabonakaliyo.
Ngo-2016 I-Honda RC213V-S ibonakaliswe: MotoGP yeNdlela?
Enye (ephosakeleyo) I-Case Against Control Traction
Ukuhlaziywa kweBMW S1000RR
Umhlahlandlela we-Honda Motorcycle Buyer Guide
Indlela yokuvavanya ukuhamba ngeekhephe ezisebenzisiweyo
I-Citizen Genêt Affair ye-1793
I-Molar Enthalpy ye-Vaporization Inkcazo
10 Izidatshulwa zamahhala zeMbali yeNtlalo yaseBrithani
I-Beltane yokutyalela izityalo zeSolitari
Inkcazo Inkcazo kunye neMzekelo
Mabon Ukupheka & Recipes
Kutheni IJapan IYasnini Shrine Ingxabano?
I-Barber yaseSvville Synopsis
Izizathu ezi-3 zokugwema ukukrakra
Funda iNkcazo epheleleyo yeKrisimesi yokuzalwa kukaYesu
USaint Paul umpostile